Fitaovana masinina CNC
Custom Delrin CNC Plastika Machined HYVW30001
HY amidy mafana grinder HYSZ100004
Huayi mpamaky ahitra paraky HYZA07002
Bling Bling 4 sosona Fashion Grinder HYVC020002
Huayi 4 Sombin-tsakafo ahitra HYZA07001
- Adidy mavesatra an-tampon'ny adidy mavesatra mandritra ny taona maro
- Tavoara misy ny style Hermes ambony tariby ho an'ny tombo-kase mihidy mafy
- Rindrina mahitsy ao anatiny mba hahafahanao mahazo ny tsimokarinao mora foana
- Ny peratra silika dia manakana ny fofona tsy hivoaka ary mitazona ny atiny ho vaovao
- Sasao ny siny mba hahafantaranao foana ny fotoana famenoana
Mandefasa fanadihadiana Mandefasa mailaka aminay
Grinder ahitra 4 sosona
Expression Gifts Brand Air Tight Stashers miafina
NY FITAHIANA NY HERBA AZY ARY NY FITANDREMANANA AZY SADY TSY AZO TSARA INDRINDRA!
Tehirizo ao anaty siny fitahirizan-drivotra azo zakaina ny ahitrao
- Reraka ve ny ahitra vaovao sy mando maina?
- Sasatra ve ianao mitazona ny tsimokarokao ao anaty kitapo hidin-zip?
- Mila fomba hitazomana ny fofona misy?
Antony 5 no fitehirizana entana ho anao! *
- Saron-tady ambony tariby Wire-Top dia mamorona tombo-kase mafy sy mafy, mitazona ny rivotra mivoaka sy ny fofony
- Ny peratra silika maharitra dia manome antoka ny tombo-kase tonga lafatra isaky ny mandeha
- Ny plastika misy ny sakafo dia tsy hiditra ao amin'ny tsimponao, na handray fofona
- Ny plastika avo lenta dia maivana ary tsy mety simba
- Ny topy namboarina dia misy dome miaro mandritra ny taona maro
** Mirefy 3 santimetatra ny sakan'ny siny, amin'izay ianao dia ho afaka mahazo lovia iray na rantsan-tànana ao mora foana.
** Amin'ny 2,5 santimetatra monja ny halavany, ity siny kely vita amin'ny mololo kely ity dia ny halehiben'ny fandehanana.
Ny Herb Grinder antsika dia vita amin'ny alim-pito 6061-T6 ary sarom-bolo mahery izay manamafy sy mateza kokoa ity fitaovana ity. Ny sarom-baravarana andriamby dia manampy anao mihazona tsara ny ahitrao ary mampihena ny famafazana.
Ity Grinder ity dia misy nify maranitra maranitra izay manosihosy tanteraka ny ampahany amin'ny ahitra rehetra, manomboka amin'ny raokandro maivana indrindra ka hatramin'ny matevina indrindra, ny fikosoham-bary izao dia tsy miova firy. Ireo nify ireo dia maranitra mandritra ny fotoana maharitra ary tsotra diovina.
Ny mpitrandraka ahitra 69.5mm dia mitana fahafaha-mitazona lehibe, izay ahafahanao manangona ahitra bebe kokoa indray mandeha.
Teo aloha: mpitresina ahitra alimo
Manaraka: mpitoto ahitra ahitra
Anaran'ny vokatra: Grinder alimina alimo
Anaran'ny marika: Huayi
Famaranana ety ivelany: fanodinkodinana
Grinder ahitra alimo, izay vita amin'ny Aluminium T-6061, izay nify maivana sy maranitra, mora entina.
Grinder Weed Grinder
Mpitrotro fifohana sigara
Fampandrenesam-boanjo ahosotra anodized logo HYCZ90003
mpitoto ahitra ahitra
grinder logo manokana
Grinder bozaka miaraka amina Logo Logo
Torolàlana feno ho an'ny tsimparifary tsara indrindra Gri ...
Tsy maninona na manao vape ianao, manakodia ny tonon-taolana na maka ravin-bongo; raha ny ahi-dratsy amin'ny fifohana sigara dia misy foana ny zavatra tsy maintsy ananana: grinder mety. Ireto ny safidinay ho an'ny makarakara tsara indrindra eny an-tsena ankehitriny. Tsy maninona raha newbie rongony ianao na mpankafy za-draharaha rehefa miresaka ...
2 / F, No.46, Dapu Rd, Huaide, Humen Town, Dongguan, Providence Guangdong 523926, Sina.